Nambarany fa tsy fanahy iniana akory sanatria ireny zava-mitranga ireny fa vokatry ny fahanteran’ny fotodrafitrasa, izay efa tamin’ny andron’ny vazaha avokoa, ny fahaverezan-drano toy ny hita eny amin’ny oniversite antony tsy hahatafakaran’ny rano eny amin’ny tanànan’Ambatomaro ary ny fitombon’ny filàna ateraky ny hafanana diso tafahoatra ankehitriny. Manampy trotraka izany dia miainga avy any Mandroseza ny rano vatsian’ny JIRAMA mahatratra 230.000 m3 isan’andro, ampy tsara ho antsika eto Antananarivo, mamakivaky ny renivohitra izay vao mandeha any amin’ireo toerana maro samihafa tsy mahazo izany. Misy amin’ireo toerana ireo anefa no efa tratra ilay fantsona manary rano fotsiny na koa ilay fantsona efa mihatery ka zara raha mahazo. Nomarihin’ity talen’ny serasera eo anivon’ny JIRAMA ity moa fa na dia tsy mipetra-potsiny izy ireo. Ho an’ireo fokontany sasany lasibatra dia efa nangataka tany hahafahany misintona rano any ambanin’ny tany izy ireo raha misy. Ny olana anefa dia efa saika maina be avokoa ny tany noho ny fiovaovan’ny toetr’andro. Manohy hatrany ilay fanaterana rano amin’ny fiara isan-tanàna izy ireo vokatr’izany. Mikasika ny vahaolana lavitr’ezaka kosa dia nambaran’ity tale iray ity fa hisy ny tetikasa iarahany amin’ny banky eoropeanina ka tafiditra ao anatin’izany ny fanarenana ireo fotodrafitrasa efa tena antitra rehetra.